HG akatevedzana chiteshi kaviri - China Kingswel Machinery
dzakatevedzana Izvi ndiwedzere muenzaniso PGB akatevedzana. Fully upgraded plasticizing ezvinhu, high quality, mukuru goho uye vakaderera rinodyiwa. Small pamwero muchina adopts zvikuru yemhando Kuumbwa kubvongodzwa kwava kutsanya uye hakuna zvakwakabatsira. Kubvongodzwa havukavu ndiyo 50% dzichimhanya kupfuura dzose mhando. Big chikero adopts High kunyatsoshanda uye simba rokuponesa, rinogona kuponesa zvinopfuura 25% simba kupfuura dzose mhando. HG dzino duku muridze Kuumbwa muchina PLC pamwe Human-muchina inowanikwa, musabata kuvhiyiwa, nyore nyore. Fully upgraded pla ...
dzakatevedzana Izvi ndiwedzere muenzaniso PGB akatevedzana. Fully upgraded plasticizing ezvinhu, high quality, mukuru goho uye vakaderera rinodyiwa.
Small pamwero muchina adopts zvikuru yemhando Kuumbwa kubvongodzwa kwava kutsanya uye hakuna zvakwakabatsira. Kubvongodzwa havukavu ndiyo 50% dzichimhanya kupfuura dzose mhando.
Big chikero adopts High kunyatsoshanda uye simba rokuponesa, rinogona kuponesa zvinopfuura 25% simba kupfuura dzose mhando.
HG dzino duku furidza Kuumbwa Machine
PLC pamwe Human-muchina inowanikwa, musabata kuvhiyiwa, nyore nyore.
Fully upgraded plasticizing ezvinhu, high quality, mukuru goho uye vakaderera rinodyiwa.
Fully upgraded extrusion ikafa musoro, zvinhu dzaanoda zvinhu & ruvara kuchinja nokukurumidza.
Vanobvuma ichangobva clamping hurongwa, ari clamping simba pamusoro chakuvhuvhu riri dzakafanana, kuti vafuke.
The zvemberi Kuumbwa kubvongodzwa kwava kutsanya uye hakuna zvakwakabatsira. Kubvongodzwa havukavu ndiyo 50% dzichimhanya kupfuura dzose mhando.
High kunyatsoshanda uye simba rokuponesa, rinogona kuponesa zvinopfuura 20% simba kupfuura dzose mhando.
HG dzino kaviri chiteshi parameter
Tsanangurai divi ( L × W × H M )
3.3 × 2.2 × 2,4
4.2 × 2.9 × 2,9
Machine uremu ( T )
Screw dhayamita (mm )
Plasticizing capacity (makirogiramu / h)
Platform chikwidzo Kurohwa (mm)
Mould platen (W × H mm )
Kufambira Kurohwa (mm )
Pump Musha( masendimita 3 / Zvak )
System Rated Pressure ( MPa )
Pump Musha( L / Min )
System Rated Power ( MPa )
Three Pasika Four Wires
Total Rated Power ( KW )
Average Energy kunwa ( KW )
65% kubva Total
Air kunwa ( mamita 3 / Nha )
Water Source Pressure ( MPa )
Water kunwa ( L / Maminitsi )
Previous: HG dzino chete chiteshi